हिन्दुराष्ट्रःसत्ता प्राप्तिको बाटो::Online News Portal from State No. 4
हिन्दुराष्ट्रःसत्ता प्राप्तिको बाटो
यतिबेला कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल हिन्दुराष्ट्र र राजासहितको प्रजातन्त्र माग्दै हस्ताक्षर संकलनमा जुटेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) को ब्यानरमा पशुपति समसेर राणा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी पनि ‘साधु’ अघिपछि लगाएर हिन्दुराज्य र राजा चाहिने नारा लगाउँदै छन् । यी सबैको केन्द्रमा रहेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र यतिबेला सर्वसाधारणसँग ‘सेल्फी’ खिचाउँदै तराई र पहाड डुलिरहेका छन् । यही मेसोमा क्षेत्री समाज नेपालले पनि हिन्दुराज्यको मागलाई जोडतोडले उठाउन थालेको छ । सुस्ताएको क्षेत्री समाजले पोखराबाटै आफूहरुलाई विभेदमा पारिएको गुनासो गर्दै हिन्दुराज्यकै अलाप निकालेको छ ।
संविधानले देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाएको छ । तर, संविधानको यही व्यवस्थाको सेरोफेरोमा बिभिन्न समूहहरुको गतिबिधि हेर्दा लाग्छ, ‘धर्म निरपेक्षता’को यो मुद्धा अझै पेचिलो बन्ने सम्भावना रहेको छ । हिन्दुबहुल देशमा हिन्दुहरुको सहानुभूति पाउन सके सत्तामा जाने बाटो खुल्ने धेरैको आश छ । निभ्न लागेको धुनीमा रोटी सेक्ने यो अभियानमा पूर्वराजाभन्दा हिजो उनकै वरिपरि रहनेहरु सक्रिय बनेपछि त्यसले देशको राजनीतिमा एकखाले शंकाको बिजारोपण भने गरेकै छ । गणतन्त्र नेपालका पहिलो राष्ट्रपतिले पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा ‘सनातन धर्म’ भन्ने संविधानमा लेखिएको वाक्य सम्झाउँदै धर्म परिवर्तनबिरुद्ध कानून बनाउनु पर्ने आशय व्यक्त गर्नु पक्कै संयोग हैन । संविधानको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिने डा. रामवरण यादवको यो भनाईले पनि देशमा केही पाक्दै त छैन भन्ने शंकामा बल पु¥याएको छ ।
भारतको आसन्न निर्वाचन र भारतीय जनता पार्टीको हिन्दुमोहले पनि यो अभियानलाई मलजल गरेको बुझ्न गाह्रो छैन । यद्यपी, भारतीय जनता पार्टी यतिबेला चुनावी मैदानमा होमिएको छ । अबका केही महिना उसले बाह्य राजनीतितिर आँखा लगाउने छैन । प्रधानमन्त्री भएपछि चारपटक नेपाल आएका र यहाँका हिन्दु शक्तिपीठहरु चहारेका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको यो अभियानमा सहयोग त छैन, तर सहयोगको आशा भने राखिएको छ । जहाँसम्म हिन्दुराज्यको कुरा छ, संविधान संशोधनबिना यो सम्भव छैन । कमल थापाहरुले दुई तिहाई ल्याएर संविधान बदल्ने उद्घोष गरे पनि गणतन्त्र संस्थागत हुँदै गरेको देशमा त्यो तत्काल सम्भव देखिँदैन । न त, हटाइएको राजतन्त्र नै यति छिटो स्थापित हुने सम्भावन छ । हो,राजनीतिक दलहरु जनताको अपेक्षा पूरा गर्न असमर्थ छन् तर उनीहरुप्रतिको भरोसा तिरोहित भइसकेको छैन । अझै पनि नेपालका अधिकांश जनताको समर्थन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी वा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई नै रहेको छ ।
नेकपा निश्चय नै धर्मनिरपेक्षताको पक्षधर हो । नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरुले हिन्दुराज्यको कुरा गरे पनि कांग्रेसले तत्काल त्यो एजेण्डा बोक्ने छैन । यस्तो अवस्थामा फरक–फरक समूह वा दलहरुले उठाएको हिन्दुराज्यको एजेण्डा मात्र आफूलाई स्थापित गर्नुमा नै सीमित रहेकोमा कुनै आशंका छैन । किनकि, हिजो त्यही एजेण्डा लिएर तेस्रो शक्ति बनेका कमल थापाले भाषणाबाहेक हिन्दुराज्यको लागि सिन्को भाँचेनन् । सत्तामा पुग्ने भ¥याङ बनाइएको एजेण्डा फेरि बोक्नु उनको बाध्यता होला तर अन्य पार्टीहरुले पनि हिन्दुवादी राग अलाप्नु भनेको कमल थापाकै बाटो रोज्नु हो र सत्तामा पुग्नु हो भन्ने जनताले बुझेका छन् । हो, नेपालको सबैजसो संस्कार र परम्पराहरु हिन्दुसँग जोडिएका छन् । आस्थासँग शक्ति रहन्छ नै । अहिले राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डसम्म विभिन्न शक्तिपीठहरुमा चहार्दै हिँड्न थालेका छन् । यहाँ दशैँमा टीका नलगाउनेहरु टीका थाप्ने भएका छन् । मन्दिर–मन्दिर पुगेर आरती उतार्न थालेका गणतन्त्र पक्षधरहरुले पनि धर्ममा शक्ति छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न थालेपछि धर्मबाटै शक्ति आर्जन गर्न खोज्नुलाई चाहिँ अन्यथा मान्नु हुँदैन ।